Mogadishu Journal » 2017 » June » 20
Ra’iisal wasaare Kheyre oo ka hadlay qaraxii degmada Wadajir
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa si kulul u cambaareeyey falkii argagaxisada ay ku bartil-maameedsadeen dad rayid ah oo ku sugnaa xarunta degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Ra’iisul Wasaaruhu waxa uu tacsi u diray...
Car bomb in Somalia capital kills at least 15: Police
At least 15 people have been killed in a suicide car bomb attack on a district headquarter office in Somalia’s capital on Tuesday. Witnesses say an attacker in a milk delivery van as detonated his car outside the Wadajir district headquarters. Captain Mohamed Hussein told the AP...
Faah faahin khasaaraha ka dhashay qaraxii ismiidaminta ahaa ka dhacay degmada Wadajir
Mjournal :-In ka badan 10 ruux ayaa ku geeriyootay qarax ismiidaamin ahaa oo goor dhow ka dhacay gudaha xarunta degmada Wadajir, iyadoo gebi dhaan dhismaha xarunta degmada ay duntay. Qaraxa oo ahaa mid aad u xooggan ayaa loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo...
Qarax ismiidaamin ah oo goor dhaw ka dhacay xarunta degmada Wadajir
Mjournal :-Qarax xooggan ayaa goor dhow ka dhacay meel ku dhow xarunta degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir, iyadoo warar kala duwan uu ka soo baxayo. Wararka qaar ayaa sheegaya in gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay uu ku qarxay nawaaxiga Xarunta degmada Wadajir oo ku dhow...
Puntland oo sheegtay in ay bur burisay saldhig Al-shabaab
Mjournal :-Puntland ayaa sheegtay inay bur burisay saldhigyo Al-Shabaab ku lahaayeen Buuraha Calmadow, iyadoo uu wali uu socdo howl gallo ciidanka Puntland ka wadaan deegaanada Buuraha Galgala. Saraakiil ka tirsan ciidamada Puntland ayaa sheegay in ciidamadooda ay wali ku guda...
The media has been quick to associate Qatar’s decision to withdraw its peacekeeping forces from the disputed Djibouti-Eritrea border with the Gulf crisis. This connection was most likely made because Qatar’s decision came only days after both Djibouti and Eritrea...
RW Kheyre oo soo dhaweeyay qabashada madaxii amniyaadka Al-shabaab
Mjournal :-Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre, ayaa sheegay in uu u mahacelinayo ciidamada amniga oo shalay gacanta ku dhigay madaxii Amniyaadka Al Shabaab ee Gobolka Banadir. Dawladda Soomaaliya ayaa shaacisay howlgal laga sameeyey...
Qatar oo sheegtay in aysan wax gorgortan ah galin doonin ilaa laga qaado xayiraada saraan
Mjournal :- Dowladda Qadar aya sheegtay in aysan wax wada hadal ah la geli doonin dowladaha carbeed ee xiriirada dhinacyada dhaqaalaha iyo safarka u jaray ilaa ay ka laabanayaan go’aankaasi lagu go’doominayo, sida laga soo xigtay wasaaradda arimaha dibadda dalkaasi. “Qadar waxaa...
Sarkaal isku dhiibay ciidamada dowladda Soomaaliya
Mjournal :-Wararka naga soo gaaraya degmada Buurhakaba ee gobolka Baay ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan uu isku dhiibay Sargaal ka tirsan Al-Shabaab. Gudoomiyaha degmada Buurhakaba Xuseen Maxamed Cali ayaa sheegay ninka isasoo dhiibay...
Soomaaliland oo walaac ka qabtay diyaaradaha dowladda Qatar
Mjournal :-Wasiirka Wasaaradda Duulista Hawada maamulka Somaliland Farxaan Aadan Heybe ayaa waxaa uu sheegay in wali Diyaaradaha dowladda Qadar ay isticmaalayaan Hawadda Somaliland. Waxaa uu sheegay intaasi ay tahay mid laga xumaado, Maadaama Somaliland ay horay Hawadeeda ay uga...
Faah faahin ku saabsan ganacsade xalay lagu dilay dulleedka Muqdisho
Mjournal :- Waxaa xalay Duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan halka loo yaqaan Tabeelaha Sheekh Ibraahim lagu dilay nin ganacsade ahaa oo magaciisa lagu sheegay C/kariin C/qaadir Axmed, waxaana dilkan Ganacsadaha la sheegay in uu ka dambeeyay askari katirsan ciidanka Nabad...